चिताबाट रुँदै उठेपछि - शैली न्युज
Homeबाह्य शक्तिलाई खुसी पार्न ओलीले महन्थ पक्षलाई १० मन्त्री दिएको नेता रावलको अ‍ेप
६ असार २०७८, आईतवार
चिताबाट रुँदै उठेपछि
२ जेष्ठ २०७८, आईतवार १४:२२
काठमाडौं । भारतको महाराष्ट्रमा अन्तिम संस्कार गर्ने बेला अर्थात चितामा आगो लगाएपछि महिला चिताबाट उठेकी छिन् । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित ७६ वर्षीया महिला शकुन्तला गायकवाडलाई मृत घोषणा गरी अन्तिम संस्कारका लागि आफन्तले महाराष्ट्रको बारामती घाट लगेका थिए ।
गाउँका प्रहरी अधिकारी सन्तोष गैकवाडले महिला घाटबाट उठेपछि उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको जनाएका छन् । महाराष्ट्रको मुधले गाउँकी ती महिलालाई आफन्तले अन्तिम संस्कार गर्न तयार हुँदा महिला रुँदै उठेकी थिइन् ।
केहि दिनअघि शकुन्तलालाई कोरोना देखिएपछि होम आइसोलेसनमा राखिएको थियो। होम आइसोलेसनमा स्वास्थ्य बिग्रिदै गएपछि परिवारले बारामती अस्पताल लगेका थिए। अस्पतालमा बेड र आईसीयू अभाव थियो। बेड र आईसीयू पाइने आशमा केही समय उनीहरुले एमबुलेन्समै राखेर कुरे।
समयमा बेड नपाएपछि शकुन्तला बेहोस भएकी थिइन्। बेहोस भएपछि आफन्तले उनलाई होसमा ल्याउन थुप्रै प्रयास गरे। तर, शकुन्तलाको शरीर शिथिल भएको थियो। अनेक प्रयास गर्दा पनि उनको शरीर चल्मलाएन। केही सीप नलागेपछि आफन्तले उनको प्राण गएको ठानेर अन्तिम संस्कारका लागि घाटमा लगेका थिए।
आफन्तले घाटमा शकुन्तलाको शरीरमा आगो लगाउन खोज्दा उनी उठेर रुँन थालेकी थिइन्।
चिनले अनुदान दिएको १८ हजार सिलिन्डर तातोपानी आइपुग्यो
दर्शकको मन जित्दै ‘सारङ्गी र्‍याई र्‍याई’ ट्रेडिङ्ग वानमा
सेयर बजारमा भारीे गिरावट, करिब १२ अर्बको कारोबार
२४ घण्टामा २४ सय ४२ संक्रमित थपिए, ३ हजार ४५६ जना संक्रमणमुक्त
प्रदेश सरकारको संञ्चारगृह संचालन गर्ने निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासङ्घले बुझायो ज्ञापनपत्र
मनाङको नासोँमा बाढी पहिरोबाट विस्थापितले ६ दिनसम्म सहयोग पाएनन्
त्रिविका रोकिएका सबै परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै साउनदेखि हुने
पहिरो हटाएर महाकाली राजमार्ग खुलाइयो
वर्षाले कालीकोटको जिल्ला कारागारको पर्खाल भत्कियो
मेलम्चीमा बाढी पिडित बासस्थानमा प्रवेश निषेध
६ असार २०७८, आईतवार २१:५३
सेतीबाट निकाल्न सकिएन शव
६ असार २०७८, आईतवार २१:४१
सरकारी डिजिटल डाटाको सुरक्षामा ध्यान सञ्चारमन्त्री थापाको दिन निर्देशन
६ असार २०७८, आईतवार २१:३४
उपत्यकामा कुन बार कुन पसल खोल्न पाइन्छ ? हेर्नुहोस् !
६ असार २०७८, आईतवार २०:४५
काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा १ हप्ता थप, निजी सवारी चल्न पाउने
६ असार २०७८, आईतवार २०:२४
६ असार २०७८, आईतवार १८:३२
तालिवान लडाकुसंगको भिडन्तमा उत्तरी अफगानिस्तानमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख मारिए
६ असार २०७८, आईतवार १८:२५
टंक तिमिल्सैना र प्रितीको दोहोरी ब्याटल ‘मेरो ब्वाईफ्रेण्ड युएसएमा छ’
२६ पुष २०७६, शनिबार १४:३८
टंक तिमिल्सैनाको जीवनशैली-‘पढाई छोडेर गल्ती गरेको महशुस हुन्छ’
२५ माघ २०७६, शनिबार ०८:४६
अछामको बिनायक पञ्चदेवलका वडाध्यक्षको मृत फेला, हत्याको आशंका
२१ माघ २०७६, मंगलवार ०८:१७
हात खुट्टा झमझमाउने र निदाउने समस्या छ ? पढ्नुहोस महत्वपूर्ण जानकारी
२१ पुष २०७६, सोमबार ११:३९
राजनीतिक दलका नेता रिझाउन सशस्त्रको दुरुपयोग
३० श्रावण २०७६, बिहीबार ०६:५२
अध्यक्ष/प्रकाशक: रामचन्द्र पोखरेल
Copyright © 2021 शैली न्युज